ဒါက နွေရာသီစံနန်းတော်ထဲ မ၀င်ခင် အရှေ့ဘက်ရှု့ခင်း။ တောင်တန်းလေးတွေနဲ့ စိတ်အေးချမ်း စရာ မြင်ကွင်းလေး....
အထဲမှာ အဆောင်ဆောင် အခန်းခန်းတွေမှ အများကြီးပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ကျယ်ပြန့်ကြီးမားသလောက် ရိုးရှင်းတဲ့ ပုံစံတွေ...
ဘုရင့် ညီလာခံကျင်းပရာ နေရာတဲ့....
ဘုရင် ရှု့မျှော်ခင်းကြည့်ရာ မျှော်စင်...
ဒီနေရာရောက်တော့ လူတွေ အတော်များတယ်။ ဘာရှိလို့လဲ မေးတော့ ဒီနေရာက ဘုရင်အတွက် နေ လ နှစ်မျိုးစလုံး တစ်ပြိုင်နက်ကြည့်နိူင်အောင် စီစဉ်ပေးထားတဲ့နေရာမို့လို့တဲ့။ အတော်များများက ရေထဲ ငုံ့ကြည့်လိုက်၊ မိုးပေါ် မော့ကြည့်လိုက်နဲ့။ ကန်အရှေ့နားရောက်အောင် အတော်လေး စောင့်ရတယ်။
အပေါ်ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့ နေကို တွေ့တာက ဟုတ်ပါပြီ။ လရောဆိုတော့ ရေကန်ထဲကို ညွှန်ပြတယ်။ ဟုတ်သား။ ရေကန်ထဲမှာ လခြမ်းလေးပါလား။ နေလ နှစ်ပါး တစ်ခါတည်း ရှု့စားချင်ရအောင် ဒီဘုရင်နှယ် အတော်လေးကို စိတ်ကူးယဉ်တတ်လေသူ ဖြစ်မယ်။
ရှည်ရှည်ဝေးဝေး စဉ်းစားနေဖို့တောင် မလိုဘူး။ မျက်နှာချင်းဆိုင်က ကျောက်တောင်တွေဆီမှာ လခြမ်းပုံလေး ခပ်စောင်းစောင်းလေး မြင်တော့ သိလိုက်တယ်။ အဲဒီက အရိပ်က ရေထဲမှာ လခြမ်းပုံလေး သွားပေါ်နေတာ...။ စီစဉ်ပေးတဲ့သူတွေကလည်း ဘုရင့် ရွှေစိတ်တော်ညိုမှာ စိုးကြောက်ရသကိုး။ ဒီတော့ မဖြစ် ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးထားရတာ နေမှာ။ မင်းနားခစားရသူဆိုတာ လွယ်တာမှ မဟုတ်တာပဲလေ။ နီးရာ ဓါးကြောက်ရတဲ့ ဘ၀တွေဆိုပါတော့။ (ကိုယ်သာဆိုရင်တော့ စည်ပိုင်းပြတ်တစ်လုံးထဲ ရေဖြည့်ပြီး ကြည့်ရော့လဟယ် ဆိုပြီး ချထားပေးမိမလားပဲ)
နောက်တစ်နေရာကျပြန်တော့ လူတွေ ညာဘက် ပြေးကပ်ပြီး ကြည့်လိုက်ကြ၊ ဘယ်ဘက်ပြေးကပ်ပြီး ကြည့်လိုက်ကြနဲ့ ဘာပါလိမ့်ဆိုတော့....။ အင်း အောက်ကပုံကိုသာ ကြည့်ကြပါလေ....။
နန်းတော်အချွန်ရဲ့ထိပ်က အသီးလေးက ဒီပုံမှာ ဘယ်ဘက်စောင်းနေတာ၊ တွေ့ကြတယ် ဟုတ်။
ဒီပုံမှာကျတော့ ညာဘက်စောင်းနေတာ တွေ့လား။
ဒီပုံကတော့ ရှေ့တည့်တည့်က ကြည့်ရင် မြင်ရတာ။
အင်း အဲဒါ ဘယ်လိုလုပ်ထားတာပါလိမ့်။ သိကြလားဟင်။ ကျွန်မက အိမ်ကလူကြီးကို မေးကြည့်ရင်း အသေအချာ ထပ်ကြည့်လိုက်တော့ ပန်းချီကားက အဲဒီနေရာမှာ တစ်ဆက်တည်းမဟုတ်ဘဲ အနိမ့်အမြင့် မတူတာ ကိုတွေ့ရတယ်။ အဲဒါကြောင့်များလား။ စဉ်းစားတုန်းပဲ။
ပြီးတော့ ဒေသစာ သွားစားခဲ့ကြတယ်။ တောဝက်သားလို့ ပြောတယ်။ အဆီမပါဘဲ အသားနဲ့ အခေါက် ချည်းပဲ။ စားရတာအတော် နုညံ့တယ်။
ဒါက ဇီချွမ်းစာ၊ ကြက်သား ပဲငါးပိ အစပ်....
ဒါက မပါမဖြစ် ရာသီစာ ကြက်ဥ
ဒါကလည်း သူတို့ဒေသစာ နာမည်ကြီး သမင်သားလို့ ပြောတာပဲ။ သိတဲ့အတိုင်း အတုလား အစစ်လား ဆိုတာတော့ ဘယ်သိနိူင်ပါ့မလဲ။ ဘာပဲပြောပြော ၀ုတ်ဝုတ်သားမဖြစ်ရင် ပြီးတာပဲ။ (စားတုန်းက သူပဲ စားပြီးတော့)
ဒါပါပဲလေ။ ဒီနေ့တော့။ နောက်တစ်ပိုစ့်ကျရင် အလျှင်ရထားနဲ့ Tianjin မြို့ကလေးကို သွားခဲ့ကြတဲ့ အကြောင်းရေးပါဦးမယ်။
tin min htet Wed Mar 14, 11:10:00 PM GMT+8
နေနဲ့လ တပြိုင်တည်း ရှုစားချင်ရင် အဲဒီဘုရင်ကို စလုံးပင့်ခဲ့ပြီး သင်္ဘောကျင်းမှာ အလုပ်သွင်းပေးလိုက်၊ လမဝင်ခင် နေထွက်ခါစမှာ အလုပ်ဆင်းရမှာ :P
TZA Thu Mar 15, 07:51:00 AM GMT+8
ရထားလည်းစီးဖြစ်တယ်ပေါ့ အမချစ်တို့တော်တော်စုံတာပဲဗျာ
မဒမ်ကိုး Thu Mar 15, 08:59:00 AM GMT+8
တော်တော် တော်တဲ့အိုင်ဒီယာနဲ့ကိုလုပ်ပေးထားတာဘဲ ဘုရင်အတွက် .သဘောကျလို့မမရေး))
mstint Thu Mar 15, 09:08:00 AM GMT+8
Sint Si Thu Mar 15, 09:10:00 AM GMT+8
All the dishes look delicious.Is the painting curve wall?
မောင်သီဟ Thu Mar 15, 09:25:00 AM GMT+8
ရောက်လည်းရောက်ဖူးချင်တယ် အကုန်ကျလည်းခံနိုင်ဖူး အစ်မရေး)း)း)
တနေ့သွားခွင့်များကြုံလေမလား အဲ တွေးတောင် တွေးဖြစ်ပါဖူး မတိုက်ဆိုင်နိုင်လို့း)း)
Cameron Thu Mar 15, 06:49:00 PM GMT+8
ညီလင်းသစ် Fri Mar 16, 12:27:00 AM GMT+8
ဘုရင့်နန်းတော်ထဲက လူတွေ အိုင်ဒီယာကောင်းလို့ ဘုရင်လည်း လ,အတုနဲ့ ဘဝတစ်ခုကို တည်ဆောက် သွားရရှာတယ်..၊း) သူတို့ Perspectives တွေ နိုင်ပုံတော့ သဘောကျတယ် မချစ်ကြည်အေးရေ..၊
ဒီ စိနတိုင်း ခရီးကို ဂရိတ်ဝေါပေါ် ခေါ်သွားပြီး ကတည်းက စောင့်နေခဲ့တာ..၊ ခရီးသွားနေလို့ ပြန်စနေတာ မသိလိုက်ဘူး၊ အခုတော့ ၁၀ ကနေ အမှီလိုက်မယ်...။းD
San San Htun Sat Mar 17, 09:13:00 AM GMT+8
ပန်းချီလေးက ထူးဆန်းသား..စီချွှမ်အစားအသောက်ကတော့ ကောင်းတယ်နဲ့တူတယ်..နွေရာသီစံနန်းတော်ကို ခုမှပဲ မြင်ဖူးတော့တယ်
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် Sat Mar 17, 03:20:00 PM GMT+8
ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်) Sun Mar 18, 04:14:00 AM GMT+8
နေနဲ့လ တစ်ပြိုင်တည်း ကြည့်ရတဲ့ အိုင်ဒီယာတော့ မိုက်တယ်..
ရှေးခေတ်လူတွေ တော်တော် အိုင်ဒီယာကောင်းတယ်နော်.. မဖြစ်ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ လုပ်တတ်တယ်.
အောက်ဆုံးက အစားအသောက်ပုံတွေကတော့ ခပ်ပါးပါးဖြစ်နေတဲ့ ဝမ်းဗိုက်လေးကို ဂွီကနဲမြည်သွားစေတယ်.း)